किड्नी बिगार्ने मानिसको एउटा यस्तो बानी : समयमै जानकारी लिनुहोस – NepalajaMedia
February 25, 2021 181
जानेर वा नजानेर हुने हाम्रा दैनिक आदतले पनि किड्नीलाई असर गरिरहेको हुन्छ। प्रायः मानिसको स्वास्थ्यको चासो रहेको किड्नीमा असर हुनुमा मानिसको लापरवाही मुख्य जिम्मेवार छन्। हामी आफै सचेत भएर मात्र मृगौला सम्बन्धि समस्याबाट बच्न सकिन्छ। यहाँ मृगौलामा समस्या कसरी आउँछ, त्यसका लक्षण के–के हुन्, मृगौला रोगबाट कसरी बच्ने, हामीले के–के खाने ? लगायतका केही जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं। तपाई पनि जानकारी राख्नुस् र आफ्नो परिवार तथा आफन्तलाई पनि यससम्बन्धि जानकारी दिएर रोगबाट बच्नुस्।
नुनको मात्रा घटाउनुहोस्, दैनिक अत्यधिक पानी पिउनुहोस्, पिसाब कहिल्यै पनि नरोक्नुहोस्, उपयुक्त खानेकुरा खानुहोस्, स्वस्थ पेय पर्दाथ खानुहोस्,धुमपान र रक्सि सेवन नगर्ने, जान्ने बनेर जथाभावी औषधी नखाने, औषधीको थप परिणामसँग प्राकृतिक जटिबुटियुक्त खाना खाने।
Prevयी युवकले एकसाथ ६ प्रेमिकालाई बनाए गर्भवती !
Next४५ वर्षमा पनि लोभैलाग्दो सुन्दरता भएकी शिल्पा शेट्टी (फोटोफिचर)
मृतक र सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश